Creative Writing » တိုင်တွေ့တိုင်း မကိုင်နဲ့။	15
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .အိုးးးးးးးးးးးးဟုတ်ပ..ကြောက်စရာပဲ
.ကြေကွဲနေတဲ့မိခင်ကိုလည်းကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 115
Tawwin Pan says: ဒီဘက်ခေတ်မှာ လူစည်းကားတဲ့နေရာမှာ လမ်းသွားရတာလည်း တကယ်ကိုမလွယ်တော့ဘူး။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ခွေးတွေဝိုင်းကိုက်ခံရတဲ့ ကလေးလေးနဲ့ ဓာတ်တိုင်ကို ကိုင်မိတဲ့ကလေးလေးက ကျွန်မအတွေးထဲကို ရောက်နေတယ် . . . ရင်ထဲမှာ ဆို့နင့်နေမိတယ် . . .
Tawwin Pan says: ခွေးတွေဝိုင်းကိုက်ခံရတဲ့ သတင်းမကြားမိဘူးကော။ ခုတလော ဖေ့ဘုတ်မသုံးဖြစ်လို့ထင်တယ်။
Thint Aye Yeik says: ဓါတ်တိုင်ဆိုလို့…
လမ်းပေါ် ရောက်နေ ကျန်နေခဲ့တဲ့ ဓါတ်တိုင်တွေကိုရှောင်ရနဲ့… ဓါတ်ကြိုးတွေကို အဲ့လို ခနော်ခနဲ့တိုင်နဲ့ လမ်းဘေးတွေမှာ ထောင်ထားတဲ့နည်း မဟုတ်ပဲ…
Tawwin Pan says: အဲလိုလုပ်ဖို့ဆိုရင် တော်တော်ကို မလွယ်လောက်သေးဘူး။
ပျင်းတကာ့ ထိပ်ခေါင်တင် says: သတိထားမှ ဒို့များက ယောင်ယောင်ပြီးကိုင်တတ်တယ်…
ခင်ဇော် says: တိုင်တွေ့ မှီတတ်တဲ့ အကျင့်လေး ဖျောက်အူးမှပါ။
Thint Aye Yeik says: အနော်ဆို တိုင်တွေ့ရင်…ဖက်ချင်တာ..။
uncle gyi says: ကံနဲ့လူမပူနဲ့တဲ့သေမယ့်သူကစာရေးပြီးသား
kai says: ပြင်စရာတွေတော်တော်.. တော်တော်…တော်တော့်ကိုများတယ်..။
လုံမလေးမွန်မွန် says: အနုပညာရှင်တွေကို အရင်ဆုံးကောက်သင့်ပါတယ်..
အောင် မိုးသူ says: အခုတော့ လိုက်လဲနေပြီလို့ထင်တာပဲ ကျတော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲမှာတော့ ကွန်ကရစ်တိုင်တွေဖြစ်သွားတာ ကြာပြီး။ ဓာတ်ကြိုးတွေကအစ ဖိုက်ဘာအုပ်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ ဖြစ်သွားပြီ။
အတွေးလေး says: ကျေးဇူးပါ အိုင်တွေ့တိုင်းလည်းမဆေး သလို တိုင်တွေ့တိုင်းလည်းမကိုင်ပါဘူးဂျာ အဓိက ကတော့ဓာတ်လိုက်တာထက် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့သုတ်ထားတဲ့နှပ်တွေ ဝါးပြီးသားပီကယ်တွေရဲ့ရန်ကိုကြောက်လို့ 😁😁😁